Madheshvani : The voice of Madhesh - नेपाल र भारतबीच समदूरी होइन, सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ : डा.रामभक्त पी.बी. ठाकुर
नेपाल र भारतबीच समदूरी होइन, सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ : डा.रामभक्त पी.बी. ठाकुर
भारतका लागि नेपाली राजदूतको रुपमा निलाम्बर आचार्यको सिफारिससँगै भएको चर्चा परिचर्चा, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन, अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ लगायतका समासामायिक विषयमा मधेशवाणीका प्रतिनिधि राकसुकुल मण्डलले पूर्वराजदुत डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुरसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
० नेपालमा अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार आएदेखि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ ?
— दुई तिहाईको सरकार आएपछि नेपालले जसरी सन्तुलित रूपमा भारतसँग हिंड्नुपर्ने थियो, नीतिहरू अपनाउनु पर्ने थियो, त्यो दिशामा यो सरकार अलि चुकेको छ । यो सरकारको झुकाव बढी उत्तर तिर देखियो । त्यसले गर्दा बीचको जुन सन्तुलन र असहज स्थिति थियो यसैको कारणले हो । पछि सरकारले यसलाई महसुस गरेर विमिस्टेकमा आफ्नो प्रभाव र सहभागिता देखायो । किनभने नेपालको समग्र विकासका लागि भारतको जतिकै आवश्यक्ता छ जति चीनको जरूरत छ । तर, भारत र चीनलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने कुरा देशको जनताको आकांक्षामा निर्भर गर्दछ ।
० त्यसोभए, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— नेपाल र भारतबीचको एउटा समदूरीको सम्बन्ध हो भनेर पहिले भनिन्थ्यो त्यो अब रहेन । भारत र नेपालको समदूरीको सम्बन्ध होइन । भारत र नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध हो । कहिलेकाँही भारततिर राम्रो भएको देखिन्छ भने कहिलेकाँही चीनतिर देखिन्छ । तर, यसमा सन्तुलन बनाउनुपर्छ न कि समदूरी । समदूरी भनेको बहुतै कन्जर्भेटिभ शब्द हो । सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर देश र जनताको आकांक्षालाई लिएर हिंड्नुपर्छ ।
० तपाइँ भारतका लागि कार्यवाहक राजदूतको रूपमा पनि कार्य गरिसक्नुभएको छ । आफ्नो जीवनको लामो समय परराष्ट्र सेवामा योगदान दिनुभयो । वर्तमान अवस्थामा नेपालप्रति भारतको नीतिमा परिवर्तन आएको हो ?
— म नेपालको परराष्ट्र सेवामा करिब ३०÷३५ वर्ष काम गरें । त्यस दौरानमा दिल्लीमा कार्यवाहक राजदूत हुँदा मैले भारतलाई बुझ्ने अवसर पाएँ । नेपालको समस्या के हो, भारतको हेर्ने दृष्टिकोण के हो लगायतका विषयमा भित्र पसेर राम्ररी बुझें । त्यो बुझेपछि मलाई के लाग्यो भने भारत नेपालँग आफ्नो स्वार्थको रूपमा सुरक्षालाई धेरै ध्यान दिदै आएको छ । त्यसैले भारत यदि नेपालसँग केही चाहन्छ भने पहिलो चीज हो सुरक्षा र अर्को कुरा इकोनोमिक पार्टनरसिप । यी दुईटै कुरामा हामी ध्यान दियौं भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कहिल्यै पनि खराब हुँदैन । अझ राम्रो भएर जान्छ ।
० अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा निलाम्बर आचार्य सिफारिश हुनुभएको छ । नेपाल र भारतबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाउन उहाँका चुनौतीहरू कति देख्नुहुन्छ ?
— यो त उहाँको व्यक्तिगत क्षमता, कुशलता, ज्ञान र प्रयासमा निर्भर पर्छ । तर, उहाँका अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन् । उहाँले यो राम्ररी बुझ्नु भएकै होला । भारत र नेपालको बीचमा उहाँले सामना गर्नुपर्ने केही समस्याहरू बहुत टड्कारो रूपमा छन् । जस्तै, के कारणले नेपाल इरिटेड हुन्छ, किन हामी भारतप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाउँछौं । त्यसको समाधानका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमाको राम्ररी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अक्सर सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीले महसुस गर्छन् कि कहीं कहीं भारतले सीमा मिचेको छ । त्यसलाई दुवै देशकै उच्चस्तरबाट वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गरिनु पर्छ । दोस्रो कुरा व्यापार घाटा हो । हामीले एक रूपैयाँ पठाउँछौं भने सात रूपैयाँ मगाउँछौं । त्यसैले, नेपालबाट निर्यात बढाउने र आयात कम गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । तेस्रो चुनौती भनेको नेपालमा भारतीय लगानी बढीभन्दा बढी आओस् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चौथो कुरा भारतको सुरक्षा हो । भारतको सुरक्षा आतंकवादीसँग धेरै सम्बन्धित छ । कुनै किसिमबाट पनि आतंकवादी क्रियाकलापहरू नेपालको भूमिबाट भारततिर जानु हुँदैन । त्यसमा उहाँ सक्रिय र सचेत हुनुपर्छ । यदि भारतको सीमामा अन्य देशहरू पुग्यो भने निश्चयरूपमा भारतको सुरक्षामा असर पर्न सक्छ । जबसम्म यस्ता समस्याहरूलाई दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन तबसम्म सम्बन्धमा सुमधुरता आउँदैन ।
० बेला–बेलामा जसरी सीमा विवादका कुराहरू आउँछन्, यसलाई दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूबारे किन पहल हुँदैन ?
— यस विषयलाई जनताले जति महत्व दिएका छन्, त्यसरी सरकारले महत्व नै दिएको छैन । यो समाधान गर्न नसक्ने कुरा होइन । किनभने अधिकांश ठाउँमा सीमा रिडिङ्ग गरिएको छ, बकायदा कागजमा नोट छ, कति डिग्री कता हो भनेर । म आफै पनि सीमामा हाकिम भएर जाँदा धेरै ठाउँमा सच्याएको छु । दुई चार ठाउँमा अलि अप्ठ्याराहरू छन् । जस्तै, सुस्ता, कैलाली, कालापानी लगायतका ठाउँमा अलि समस्याग्रस्त छ । त्यसमा अलि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, बाँकी ठाउँमा वैज्ञानिक रूपले मिलेको छ ।
० भारतले सीमा मिच्यो भन्ने कुराहरू आउँछन्, तर चीनले पनि नेपालको सीमा मिचेको छ । ती कुराहरू किन बाहिर आउँदैनन् ?
— सीमा मिचेको भन्ने शब्द म त्यति मन पराउँदिन । सीमा मिचेको जस्तो देखियो, मिचेको पनि होला तर त्यसका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले मिलेर समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
० नेपाललाई ल्याण्डलक्ड कन्ट्रि भनिन्छ । यो ल्याण्डलक्ड कन्ट्रिलाई ल्याण्डलिंक्ड कन्ट्रिको रूपमा किन सदुपयोग गर्न सकिएन ?
— ल्याण्डलिंक्ड शब्द राम्रो हो र गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेसम्म इण्डिया लिंक्ड नै हो । उत्तरतिर हामीले खोलेकै छैनौं । एउटा तातोपानीको नाका थियो त्यो पनि ध्वस्त भयो । अब मुस्ताङ र रसुवाबाट खोल्ने भनिएको छ । अर्थ कम छ र राजनीतिक कुरा बढी लागिरहेको छ । त्यो गरेर देशलाई राम्रो हुनुप¥यो । तर, त्यसको सदुपयोग राम्रो उद्देश्यले गर्नुपर्छ ।
० भनेपछि, ल्याण्डलिंक्डको रूपमा नेपालले फाइदा लिन सक्ला त ?
— अहिले चलिरहेको कार्यक्रमअनुसार चीनको बीआरआई (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ) छ, यस्तो किसिमले खर्बौंखर्ब ऋण यदि नेपालको टाउकोमा आउँछ भने त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपालको इकोनोमीले धान्न सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो त्यति आर्थिक क्रियाकलाप छ कि छैन, पछि बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, कि ऋण डुबेर खत्तम हुने हो यी सब कुराहरू हेरेर एकै चोटि ठूलो क्रियाकलाप गर्नुभन्दा विस्तारै गरेको राम्रो हुन्छ ।
० नेपालमा जसरी भारतको लगानीहरू आउँछन्, त्यो कतिपय परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन, अलपत्र परिरहेको हुन्छ । यसमा कमजोरी कहाँ देख्नुहुन्छ ?
— यसमा सरकार र लगानी गर्ने पक्षको पनि कमजोरी रहेको हुन्छ । जो मान्छे लगानी गर्न आउँछ उसले आफ्नो फाइदा सोचिरहेको हुन्छ । फाइदा भयो भने फटाफट सबै काम भइहाल्छ । यसले गर्दा मान्छेहरू बहुत निरूत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा विदेशी लगानी किन भइरहेको छैन भने यहाँ अलि राम्रो वातावरण छैन । यहाँ मान्छेले सुरक्षा महसुस गरिरहेको छैन । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म लगानी गर्दैन । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन ।
० नेपालले भारतसँग अझ सम्बन्ध सुमधुर बनाउन वा भारतीय लगानी भित्र्याउन कस्ता राजदूत पठाउनुपर्ने हो ?
— नेपालले भारतमा आफ्ना राजदूत पठाउँदा मधेशकै कुनै विद्वान व्यक्ति पठाउनुपर्ने हो, जसले नेपालको हित राम्ररी बुझेका छन् र भारतको पनि हित बुझेका छन् । दुईटैको हित बुझेर राम्ररी काम गर्ने मधेशका कोही विद्वान व्यक्तिलाई नेपालले राजदूतको रूपमा पठायो भने त्यसले धेरै सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छ । जसले नेपालको मात्रै वा भारतकै मात्रै हित हेर्छ उसले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल र भारतको हित बुझ्ने व्यक्तिलाई नेपालले राजदूतको रूपमा पठायो भने त्यसले दुवै देशलाई हित गर्न सक्छ । किनभने हाम्रो आर्थिक समृद्धि, भविष्य र सुख सँगसँगै गाँसिएको छ ।
० मधेशका त्यस्ता विद्वत व्यक्ति किन बाहिर आउँदैनन् त ?
— हेर्नुस्, राम्रो मान्छेले मलाई राजदूत पठाइदेउ भन्दैनन् र जो मान्छेले राजदूतको रूपमा पठाइदिनुस् भन्छन् त्यो राम्रो मान्छे नै होइन । मधेशमा थुप्रै विद्वान व्यक्तिहरू छन्, जसले राष्ट्रको हितमा र भारतको पनि हित राम्ररी बुझेर काम गर्न सक्नछन् । म मात्रै होइन, मभन्दा पनि राम्रा–राम्रा मान्छेहरू छन् । तर, राष्ट्रले उसलाई ल्याउनुपर्छ । किनभने राम्रो कहिल्यै पनि भिख मागेर हिंड्दैन ।
० भनेपछि, अहिलेसम्म राज्यले त्यस्ता मान्छेहरूको पहिचान गर्न सकेको छैन । आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्र मौका दिने गरेको छ ?
— त्यो त हो । जो कुनै पार्टीका सदस्य हुन् वा नजिक छन् त्यस्ता मान्छेहरू मात्र जान्छन् । उसले त्यहाँ गएर पार्टीको मात्रै हित गर्छ, राष्ट्रको हित उसको ध्यानमै हुँदैन । अहिलेसम्म जति पनि राजदूत त्यहाँ गएका छन् सबैको रेकर्ड नराम्रो नै देखिएको छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठा पनि गुमाइरहेका छौं र राजदूतको जुन प्रतिष्ठा हुन्छ त्यो त खत्तम नै भइसकेको छ ।
० दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउन नेपाल र भारतबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नभएको होला ?
— त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह नै अधुरो थियो । सीमा क्षेत्रको समस्या र सन् १९५० को सन्धि अध्ययन गर्नका लागि त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह बनाइएको थियो । त्यो समूहमा नेपालको तर्फबाट एउटा पनि मधेशका मान्छे थिएन । त्यसैले अधुरो दृष्टिकोण नेपालको पहिले नै देखियो । तर भारतको पक्षमा हेर्नुस्, त्यसमा नेपाली जान्ने एउटा उप्रेती, एउटा लामाजी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, त्यस क्षेत्रका समस्या बुझेका मधेशका पनि दुई जना विद्वानलाई नेपालले आफ्नो तर्फबाट सदस्य बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, मधेशका मान्छेलाई सरकारले विश्वासै गर्दैन । भन्ने बेलामा यो देश सबै नेपालीको हो भन्ने तर, व्यवहारमा विभेद गर्ने । नेपालमा मधेशका मान्छेलाई यो तपाइँको देश हो भन्ने तर दिने बेलामा जम्मै पहाडका मान्छेलाई दिने गरिन्छ ।
० भनेपछि, सीमा क्षेत्रको समस्या नबुझ्ने व्यक्तिहरू त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहमा थिए ?
— प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन त्यो त म भन्न सक्दिँन । त्यसमा मधेशकै मान्छे नभएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो भनेर म भन्दिँन । तर, त्यो प्रतिवेदनमा दृष्टिकोण के राखेको छ । तर, त्यस समूहमा मधेशको विद्वान मान्छे राखेको भए अवश्य पनि त्यहाँ दृष्टिकोण फरक हुन्थ्यो र स्वीकारयोग्य कुराहरू जान्थ्यो होला । त्यो प्रतिवेदनमा अवश्य पनि केही न केही कुरामा चित्त बुझेको छैन त्यसले गर्दा सार्वजनिक हुन ढिलो भइरहेको छ । हुन अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चुनावमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ । तर, त्योभन्दा अगाडि प्रतिवेदन आउन सक्थ्यो होला । हुनसक्छ यस्ता–यस्ता कुराहरू होलान् जसले भारतलाई धेरै नै नोक्सान पर्ने होला । त्यसले त्यसलाई अझ अध्ययन र विचार गर्नका लागि रोकिएको होला ।
० तपाइँ जसरी भारतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूतको रूपमा काम गर्नुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो त ?
— मैले आफ्नो अनुभव भनें भने तपाइँ विश्वासै गर्नुहुन्न । भारतजस्तो सजिलो देश नेपालका लागि कहीं छँदैछैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँ काम गर्न एकदम सजिलो, मान्छेहरू एकदमै मित्रपूर्वक व्यवहार गर्ने र नेपालको दुःखमा खडा हुने मान्छेहरू छन् । कुरा के आउँछ भने तपाइँको नजरिया के हो, व्यवहार के हो, एप्रोच के हो र तपाइँ कसरी भारतको सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहुन्छ । यदि त्यसो गर्नुभयो भने भारतजस्तो मित्र कहीं छैन । भारत एउटा कल्पवृक्ष हो । कल्पवृक्षमा तपाइँ गएर हे कल्पवृक्ष तपाइँ मलाई यो देउ भनेपछि आइहाल्छ । त्यस्तै, नेपालले भारतसँग जहिले पनि जे माग्छ, त्यो दिन तयार हुन्छ । नेपालको दुःखसुखमा खडा हुने देशको भारत हो । त्यसलाई हामी नबुझेर गलत किसिमले व्यवहार गरेको हुनाले हामी दुःख पाइरहेका छौं ।